Ngwá Ọrụ nlekota akụrụngwa IT | Motadata
Ngwaọrụ nlekota akụrụngwa IT
Nlebanya zuru oke n'ofe On-Prem, igwe ojii na akụrụngwa ngwakọ.
Ọhụhụ miri emi jikọtara ya na
Nlebanya na nyocha zuru oke
Site na otu ikpo okwu a na-ahụkarị maka nleba anya, ntinye ndekọ ndekọ, ilele anya na ịdọ aka ná ntị na ihe omume niile n'ofe ngwakọ infra gị, anyị na-enyere ndị isi ọrụ IT aka ịnapụta nsonaazụ azụmaahịa ka mma site na ọgụgụ isi Data-chụpụrụ. Chọpụta ma nyochaa ọrụ igwe ojii, VM, arịa, netwọkụ, ngwaọrụ, ndekọ, mmemme na ọtụtụ ndị ọzọ n'okpuru otu ikpo okwu AI kwadoro.
Ọnweghị ihe na-edobe anya
Motadata AIOps na-enye ikike nnakọta data buru ibu ma ndị nnọchi anya yana ụzọ ndị na-enweghị onye nnọchi anya n'ofe ụlọ gị, igwe ojii na akụrụngwa ngwakọ.
Nweta ngwa nlekota oru maka puku kwuru puku ngwaọrụ na teknụzụ n'ofe netwọkụ gị, ihe nkesa, ngwa na oyi akwa igwe ojii.
Chịkọta ihe niile ya na onye nnọchite anya ma ọ bụ nnakọta enweghị onye nnọchi anya gụnyere metrik, ndekọ, mmemme, okporo ụzọ na data nkwanye.
Wepụ ngwaọrụ nlekota ihe site n'iweta data nlekota gị niile n'otu ebe iji nweta visibiliti miri emi.
Nkwanye ngwa ngwa yana nhazi akpaaka
Site na nchọta akpaaka na ngwa nleba anya akọwapụtara nke ọma, a na-agbakwunye akụrụngwa infra ngwakọ gị na Motadata AIOps ozugbo.
Echiche Topology: Hụ na-agbanwe mmekọrịta IT na-aga n'ihu dabere na ụkpụrụ nchọpụta na ọbụna mkparịta ụka okporo ụzọ netwọkụ.
Dashboards & Akụkọ: Ikike nleba anya na dashboard nke na-ebuga ahụmịhe nleba anya gị n'ọkwa ọzọ na-achọghị asụsụ ajụjụ.
Ihe nchọta data aga n'ihu: Ndị nyocha data dị elu na AI-chụpụrụ na-enyere gị aka ịghọta data wee soro mmetụta metrik/usoro ọ bụla na-agba na ngwugwu gị.
Akara ngosi ziri ezi
Ndị otu DevOps na IT chọrọ ọnọdụ mmemme kwesịrị ekwesị iji jiri obi ike chọpụta ihe ndị dị oke egwu na ndị na-adịghị mkpa.
Igwe mmụta na-akwado ịdọ aka ná ntị na-enye ikike iwepụta nghọta bara uru iji kewapụ akara na mkpọtụ.
Real-oge ịgụ isiokwu maka nchọta akpaaka na maapụ ndabere iji mekọrịta ndabere ọrụ IT.
Nchịkọta data dị ala na ndị nnọchi anya - dị ka obere nke abụọ maka njirimara ngwa ngwa na mkpebi.
Jiri kwalite akụrụngwa akụrụngwa gị
Mkpokọta onye nnọchi anya/onye na-enweghị onye nnọchi anya
Na-agbasi mbọ ike na-anakọta, hazie ma mezie metrik gị, ozi ndekọ, na mmemme gị n'otu ebe etiti - ngwaọrụ netwọkụ, kọmpụta, ikike ime mmụọ na igwe ojii n'otu nlele jikọtara ọnụ.
Nchọpụta akpaaka na nhazi ọkụ ọkụ na-eme ka ị na-agba ọsọ na nkeji. Nyochaa ojiji akụrụngwa yana metrik dị egwu na bọọdụ akọwapụtagoro na nke a na-ahazi
Site na ijikọ mmụta igwe na nyocha, a na-enye gị ike iwepụta akara site na mkpọtụ njikere. Algọridim ML arụnyere n'ime na-enye nchọpụta anomaly na nghọta enwere ike ime
Nweta nlekota oru ngwụcha ruo ọgwụgwụ.
Na-enye visibiliti ogo 360 zuru oke.
Na-enye otu dashboard maka metrik niile.
inyocha Nlekota oru akụrụngwa
Nleba anya akụrụngwa nke Motadata kwadoro na-enyocha ihe ọ bụla na ihe ọ bụla na-eme ka akụrụngwa gị dị mma ma mara mma, yana azụmahịa gị na-eto.
Kedu ihe bụ nlekota akụrụngwa?
Nleba anya akụrụngwa bụ usoro nke gụnyere ịnakọta na nyocha data sitere na isi mmalite dị iche iche iji chọpụta nsogbu ndị nwere ike ime, dị ka okwu arụmọrụ ma ọ bụ mmebi nchekwa. N'ihi nke a, ileba anya akụrụngwa nke nzukọ a na-emesi ike na enwere sistemu, ahụike dị mma, yana oge opekempe.
Kedu ihe kpatara nlekota akụrụngwa ji dị mkpa?
Ogo nke Ọrụ (QoS) na-akọwapụta uto ụlọ ọrụ ọ bụla, ọ dabere na otu esi ejikwa yana nyochaa akụrụngwa. Akụkụ dị iche iche dị ka ngwaọrụ ejikọrọ, netwọkụ, ngwa, sava, nchekwa, sistemụ arụmọrụ na-eme ka akụrụngwa bụrụ otu gburugburu ebe obibi zuru oke iji nyochaa. Nyochaa akụrụngwa na-eme ka ọ dị mfe ịchọta ihe kpatara ọdịda ọ bụla ma dozie otu ihe ahụ tupu ndị ọrụ eche ihu oge ọ bụla.
Otu esi ahọrọ Ngwọta nlekota akụrụngwa?
N'agbanyeghị na-atụle oge na-eri-irè, akụrụngwa nlekota ngwọta na-adabere dị iche iche metrics dị ka ụdị nke nzukọ, akụrụngwa, chọrọ, wdg Dị ka ulo oru evolve, ndị ọzọ siri ike na ike azụmahịa kwesịrị iguzo, ndị ọzọ elu na evolushọn na nlekota ngwọta ọ ga-abụ. Ngwọta nlekota nke ọma kwesịrị inwe ike nyochaa obi na mkpụrụ obi nke arụ ọrụ ma dozie ọdịda ndị nwere ike ime.
Kedu uru dị na nlekota akụrụngwa?
Site na nlekota akụrụngwa, ihe ngwọta na-enyere aka belata ọnụ ahịa site n'ibelata oge nkwụsị na imeziwanye oge. Ọnụ ọgụgụ adịghị ike dị ole na ole na-echekwa akụrụngwa ma na-akwalite afọ ojuju ndị ahịa. Na mgbakwunye, site na imeziwanye oge nzaghachi na idozi njehie ndị ọzọ na-egbu egbu, omume nlekota na-enyere aka melite arụpụta ọrụ.